केटीका बाबुले प्रहरीलाई पैसा खुवाएको केटीको भनाई (भिडियो सहित) - Action Khabar - Nepali Online News Portal
केटीका बाबुले प्रहरीलाई पैसा खुवाएको केटीको भनाई (भिडियो सहित)
हिरासत भित्र युवकको मृत्यु प्रकरणः
सुनसरी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको हिरासतभित्र युवकको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा दिनभर तनावग्रस्त रह्यो ।
अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रहरीको कारागारमा रहेका भोक्राहा ५ का मोहम्मद हकिव शाहले कारागारभित्रै पासो लगाएर आत्महत्या गरेको घटनामा मृतकका आफन्तले प्रहरीले नै मारेको आरोप लगाउँदै दिनभर प्रदर्शन गर्दै प्रहरी कार्यालयमै ढुंगामुढा गरे ।
महिला तथा ठूलो संख्याको जमातले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रहरी कार्यालय र इनरुवा बजारमा प्रर्दशन गर्दा प्रहरीले आधा दर्जन बढी अश्रुग्याँस प्रहार गर्यो । घटनामा चारजना प्रदर्शनकारी घाइते हुँदा एकदर्जन सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भए ।
हिरासतभित्र रहेका युवाले पासो लगाएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाई छ । तर, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई कसले डोरी दियो ? उसलाई आत्महत्या गर्न कसले उक्सायो ? कतै प्रहरीकै संलग्नता त छैन ? प्रश्न उठेका छन् । बुझ्नुपर्ने तथ्यः सामान्यतया हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई उसकै परिवारकाले खाना ल्याइदिँदा समेत सुरक्षाकर्मीले कडा चेकजाँच गर्छन् । तर, हिरासतमा भएकालाई कसले डोरी दियो ? फेरी उनीसँगै रहेका अन्य कैदीहरुले आत्महत्या गरेको किन देखेनन् ? पासो लाग्दै गरेको देखेको भए किन बचाइएन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ । प्रहरीको सिसिटिभीमा पासो लाग्न जाँदै गरेको देखिएको भनिएको छ तर, झुण्डिएको रेकर्ड छैन ।
मृतक युवकका बुबा मुलमहम्द हकिवका अनुसार केही दिन अगाडी छोरालाई ४–५ हजार रुपैंया धरौटीमा प्रहरीले छाड्ने भनेको थियो । तर, त्यस अगाडी नै उनी मृत भेटिए ।
अन्तरजाती/धर्मविचको प्रेम सम्बन्धले निम्त्याएको घटना
अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा हिरासतमा रहेका ती युवाको इनरुवाकै हिन्दु धर्मकी परिवारकी युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध थियो । उनका बुबा बिष्णु शर्मा हार्यवेयर व्यापारी हुन् । केटा र केटीको घर झण्डै आधा किलोमिटरको दुरीमा छ । उनीहरु विगत दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । केटा मुस्लिम केटी हिन्दु समुदायका भएकाले समाजमा खुल्न सकेका थिएनन् । त्यसमाथि त्यसबेला उनीहरुको उमेर नपुगेको भन्दै प्रहरीले नै उमेर पुगेपछि विहे गर्न सुझाएको स्वयं रानी शर्माले टिकटकको एक भिडियोमा बताएकी छन् ।
उमेर पुगेपछि पनि समाजले दुवैको सम्बन्ध खासगरी केटी पक्षकाले स्वीकार नगर्ने देखेपछि दुवै जना राजिखुसी भागेका थिए ।
रानी शर्मा नाम गरेकी ती युवतीले आफुहरु असुरक्षित रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा भिडियो पोस्ट गरेकी छन् । जसमा उनले सहयोगको याचना गर्दै आफ्नो र मोहम्मद हकिवको प्रेम सम्बन्ध घर परिवारले स्वीकार गर्न नसकेकाले राजिखुसी भागेको जिकीर छ ।
‘म आफ्नो मर्जीले इनरुवाको मुस्लिम केटासँग भागेर विहे गरेकी छु र धेरै खुसी छु ।’ टिकटकमा सहयोगको याचना गर्दै ती युवतीले आफुहरुको प्रेम आफ्नै बाबुआमाले स्वीकार नगरेको बताएकी छन् ।
भिडियोमा आफुहरुलाई मार्न बुबा (विष्णु शर्मा) ले इण्डियाबाट समेत त्रिमिनल मान्छेहरु झिकाएको बताउँदै ती युवतीले इनरुवाका प्रहरी प्रशासनलाई समेत बुबाले पैसा दिएर मिलाएको बताएकी छन् । आफ्नो परिवार सम्पन्न भएको र परिवार नै सम्बन्धको खिलाफ भएको भन्दै बुबाले सबैलाई पैसा खुवाएर केटाका घरपरिवारलाई मार्ने धम्की दिएको उनको भनाई छ ।
उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा दुई वर्षअघि इनरुवा प्रहरीमा समेत छलफल चल्दा आफनो उमेर नपुगेकाले प्रहरीले ‘अहिले विहे गर्न मिल्दैन उमेर पुगेपछि गर्नु’ भनेर सल्लाह दिएको बताउँदै ती युवतीले घर परिवारले बारम्बार अरु केटासँग विवाह गर्न दवाव दिइरहेको र केटालाई मार्ने धम्की दिएको उल्लेख गरेकी छन् । त्यसबेला विवाहको लागि उमेर पुगेपनि बुबाले वडा कार्यालयमा समेत घुस खुवाएर उमेर घटाएर जन्मदर्ता बनाइदिएको उनको भनाई छ । स्थानीयका अनुसार अहिले केटी गर्भवती छन् । उनको गर्भमा चार महिनाको बच्चा रहेको बताइन्छ ।
यता मृतक केटाका बुबा मुलमहम्द हकिवले असोज १२ गते मंगलबार छोरालाई धनकुटाको हिलेबाट पक्राउ गरी ल्याएको र अभद्र मुद्दामा राखेको बताए । छोरालाई पक्राउ गरेपछि केटी पक्षले आफुलाई बारम्बार ‘तेरो छोेरालाई प्रहरीको कस्टडी भित्रै मारिदिन्छौं’ भनेर धम्की दिएको उनको भनाई छ ।
केही दिन अगाडी मात्रै उनले छोरालाई हिरासतमा भेटेर ‘प्रहरीले दुईचार दिनमा छाडिदिन्छ’ भन्दै धरौटीकालागि ५ हजार छाडेर गएका थिए । तर, केटी पक्षकाले पटक–पटक छोरालाई प्रहरीको कस्टडीमै मारिदिने धम्की दिन थालेपछि उनी गाउँकै दुईचार जनालाई लिएर प्रहरी कार्यालय धाएका थिए ।
स्थानीयले केटीका बुबाले प्रहरीलाई पैसा खुवाएर नै केटालाई पक्राउ गरेको जिकीर गर्छन् । ‘दुई जना राजिखुसी भागेका थिए, पुलिसले पक्राउ गरेपनि दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलापत्र गराउनु पर्दथ्यो । एकतर्फी केटालाई थुन्ने काम मात्र गर्यो ।’ एक स्थानीय भन्छन् । स्थानीय एक सञ्चारकर्मीले समेत घटना हिन्दु र मुस्लिम विचको प्रेम सम्बन्धकै कारण घटेको बताए ।
मृतकका बुबा, जिल्ला प्रशासन, हरिनगर र कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुसहितको छलफलमा घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । छानबिन समितिको संयोजकमा सहायक प्रजिअ महेश पोखरेल छन् । समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी नरेन्द्र कार्की, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष, भोक्राहा नरसिंह वडा नं ५ का अध्यक्ष र २ जना मृतकका आफन्त छन् ।
- २५ आश्विन २०७८, सोमबार १६:४५ मा प्रकाशित